काम को लागी प्रार्थना। ? पत्ता लगाउनुहोस्, पाउनुहोस् र भनिन्छ
10 न्यूनतम पढाई
कामको लागि प्रार्थना हामी धेरै फाइदाहरू प्राप्त गर्न सक्छौं।
प्रार्थना एक आध्यात्मिक रणनीति हो जसले हामीलाई समस्याहरूको समाधान खोज्न मद्दत गर्दछ जसमा हामी प्राय: के गर्ने वा के गर्ने भनेर जान्दैनौं।
यो विशेष वाक्यमा हामी आफैलाई सोध्न सक्छौं, ताकि कार्य वातावरण रमाइलो छ, हाम्रो हाकिम वा अधीनस्थहरूको लागि सोध्नुहोस् र केहि थप अनुरोध जुन वातावरणमा उठ्न सक्ने विभिन्न परिस्थितिहरूमा निर्भर गर्दछ।
महत्त्वपूर्ण कुरा यो जान्नु हो कि श्रम मुद्दाहरूको लागि त्यहाँ पनि छन् प्रार्थनाहरू त्यो विशेष र सीधै गर्न सकिन्छ, सँधै यो याद राख्नुपर्दछ कि प्रार्थना भनेको विश्वासको एक कार्य हो जुन यसमा भएको शक्तिमा विश्वास गरेर हुनुपर्दछ।
1 कामका लागि प्रार्थना के यो शक्तिशाली छ?
1.1 काम खोज्नको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
1.2 काम आशीर्वाद गर्न प्रार्थना
1.33दिनमा काम पाउन प्रार्थना गर्नुहोस्
1.4 तत्काल काम अनुरोध गर्न
1.5 मलाई एक काम कल गर्न
कामका लागि प्रार्थना के यो शक्तिशाली छ?
कुनै पनि प्रार्थना शक्तिशाली छ। यसको लागि विश्वाससहित प्रार्थना गर्न पर्याप्त छ।
यदि तपाईंसँग धेरै विश्वास छ र यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि सबै ठीकठाक छ, यसले काम गर्दछ।
भगवानमा विश्वास गर्नुहोस् यो यसको शक्तिहरु मा बढ्छ। त्यसो भए तपाईंं सबै कुरा ठीक दिनुहुन्छ।
अधिक समय बर्बाद नगर्नुहोस्, अहिले नै प्रार्थना गर्न सुरू गर्नुहोस्!
काम खोज्नको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
येशू, अनन्त स्वर्गका पिता:
मेरो बुबा, मेरो गाइड, मेरो बल, म तपाईंसँग मेरो मुक्तिदाता बोल्दछु ...
तपाईं यहाँ आफ्नो छोरा छ जो पाप गरेका छ, तर कसले तपाईंलाई प्रेम ...
तपाईको प्रेमको लागि, तपाईको अनन्त भलाइ र तपाईले हामीलाई दिनुहुने सुरक्षाका लागि तपाईले प्रशंसा गर्नुभयो।
त्यो तपाईका लागि सबै कुरा सम्भव छ र तपाई जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईको अनुग्रह अपार छ र तपाईले मलाई कहिले पनि नत्याग्नुहुन्छ। र कष्टको समयमा तपाईंले मेरो हात कहिल्यै छोड्नु भएन।
तपाईं रोटी हुनुहुन्छ, तपाईं जीवन हुनुहुन्थ्यो, तपाईं माया र सान्त्वना हुनुहुन्छ। अँध्यारोमा तपाईंको ज्योतिले मलाई निर्देशित गर्दछ। म तपाईं कहाँ आउँछु, घुँडा टेकेर, मेरा प्यारा बुबा, म तपाईंको सुरक्षाको लागि, तपाईंको अनन्त भलाइको लागि प्रार्थना गर्न फेरि आउनेछु।
किनकि मलाई थाहा छ कि तपाईंको हातबाट म केहि पनि डराउँदिन र मसँग अभावको पनि छैन। किनकि तपाईं, हे भगवान का भगवान, अभिभूतलाई सहायता गर्नुहोस्।
म तपाईंलाई मेरो चिन्ता हटाउने बिन्ती गर्दछु, म बिन्ती गर्दछु कि मेरो बिन्ती सुन्नुहोस्। मेरो दु: ख र छुटकारा छुटकारा।
बुबा, मेरी प्यारी येशूले पुनर्जीवित हुनुभयो, मेरो आवश्यकतालाई हेर्नुहोस् र मलाई उनीहरूको समर्थन गर्न मद्दत गर्नुहोस्। म तपाईंलाई नयाँ कामको लागि बिन्ती गर्दछु, मेरो बुबा।
किनकि मलाई थाहा छ तपाईंको योजनाहरू सही छन्, किनकि मँ कर्नर भएको महसुस गर्छु। म तपाईंसँग मेरो काम अनुरोध गर्न आएको हुँ। मेरो परिवारलाई सहयोग गर्न मलाई त्यो जागिर चाहिन्छ।
मलाई थाहा छ तपाईं आफ्नो महान भलाईमा, तपाईंले मलाई आफ्नो हातका कारण लडाउन दिनुहुनेछैन, म डराउनेछैनँ र राहत महसुस गर्नेछु। म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु बुबा, मेरो तृष्णा तुरुन्त प्रदान होस्।
धन्यका र स्वर्गीय बुबा मलाई थाहा छ तपाईंले आशाको ढोका र विन्डोहरू खोल्नुहुनेछ। मलाई थाहा छ कि तपाईंको असीम कृपामा तपाईंले मेरो लागि राम्रो कार्य फेला पार्नुहुनेछ।
हे मेरो प्रभु, धैर्यवान र इनाम पाउनलाई मद्दत गर्नुहोस्। उसलाई एउटा सभ्य, सम्पन्न र स्थिर जागिर बनाउनुहोस्। मेरो अनुरोध मा अन्तर्वार्ता आफैलाई आर्थिक स्थापना गर्न।
मलाई प्रदायक बनाउनुहोस् र मेरो परिवारलाई, खानालाई आशिष् दिनुहोस्।
म तपाईंलाई त्यो कामको लागि वा मेरो आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न बिन्ती गर्दछु।
(चुपचाप तपाईंको विशेष अनुरोध बनाउनुहोस्)
हे मेरो भारी, म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु, हे मेरो प्रभु।
हे भगवान, म तपाईंमा सबै कुरा विश्वास गर्दछु।
हे प्रभु, सदासर्वदा तपाईलाई आशीर्वाद दिनुहोस्
काम पाउनको लागि यो प्रार्थना धेरै शक्तिशाली छ!
विश्वका धेरै शहरहरूमा श्रम स crisis्कट फैलिएको छ। यद्यपि यस विशेष केसका लागि त्यहाँ एक विशिष्ट वाक्य छ।
यस अर्थमा, सबै भन्दा सल्लाह दिईएको कुरा भनेको सिधा र ईमान्दारीपूर्वक सोध्नु हो कि हामी के हेर्न चाहन्छौं, हामी के काम प्राप्त गर्न चाहन्छौं र विश्वास गर्न सोध्छौं।
हृदयबाट त्यस्तो प्रार्थना गरिएको छैन जुन हाम्रो आत्मालाई सकारात्मक उर्जाले भर्दैन र उही उर्जा जुन हामी जहाँ पुग्छ हामी प्रसारण गर्न जाँदैछौं।
एक शक्तिशाली प्रार्थनाले हाम्रो शारीरिक शक्तिको साथ पार गर्न असम्भव छ कि चेन तोड्न सक्छ।
काम आशीर्वाद गर्न प्रार्थना
म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु, प्रभु, किनभने म काम गर्न सक्छु।
मेरो काम र मेरा सहकर्मीहरुलाई धन्यबाद।
हामीलाई दैनिक काम मार्फत भेट्नका लागि अनुग्रह दिनुहोस्।
अरूको अथक सेवक हुन हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हाम्रो कार्यलाई प्रार्थना गर्न सहयोग गर्नुहोस्।
हामीलाई काममा राम्रो संसारको सम्भावनाको खोजी गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
महोदय, न्यायको निम्ति हाम्रो तिर्खा मेट्न सक्ने एक मात्र व्यक्तिको रूपमा, हामीलाई सबै व्यर्थबाट आफूलाई स्वतन्त्र पार्न र नम्र हुन अनुग्रह दिनुहोस्।
म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु, प्रभु, किनभने म काम गर्न सक्छु। मेरो परिवारको सहयोगको कमी नहोस् र प्रत्येक घरमा सम्मानपूर्वक बाँच्नको लागि सधैं आवश्यक हुन्छ।
हाम्रो जीवन वा वरपरकाको जीवनलाई आशिष दिनको लागि प्रार्थनाहरू गर्न सकिन्छ ईमानदार अनुरोधहरू जुन गर्न सकिन्छ।
जब हामी अरूलाई सोध्छौं हामी परमेश्वरले दिनुभएका असल हृदयहरू देखाउँदछौं।
यसैले हामी प्रार्थना गर्छौं काम आशीर्वाद गर्न यो हाम्रो आफ्नै फाइदाको लागि प्रार्थना होइन तर हामीसँग काम वातावरण साझा गर्ने सबैको हितको लागि हो।
यस वाक्यमा तपाईले ती परिस्थितिहरूको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ जुन काम वातावरण खराब उर्जा र नकारात्मक विचारहरूले भरिएको छ।
3 दिनमा काम पाउन प्रार्थना गर्नुहोस्
येशू, मेरो असल येशू, मेरा प्रिय येशू, मेरा प्रभु, मेरो गोठाला, मेरो मुक्तिदाता, मेरा परमेश्वर, म तपाईंलाई अनन्त पिताको पुत्रको रूपमा मान्दछु, म तपाईंलाई विश्वास गर्दछु र तपाईंको करुणा र भलाइको लागि म तपाईंको प्रशंसा गर्दछु, किनकि म तपाईंलाई आदर गर्दछु किनकि तपाईं मलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ र तपाईंसँग म कुनै कुरासँग डराउँदिन, म तपाईंलाई माया गर्छु किनकि तपाईंले मलाई अनुग्रह र स्वर्गीय अनुग्रहले वर्षा गर्नुहुन्छ हरेक चोटि जब म तपाईंको पीडासँग तपाईंसामु आउँछु, हरेक पल्ट म तपाईंको सहयोग माग्दछु।
येशू, मेरो असल येशू, मेरो प्यारो येशू, तपाईं जो अनन्त ज्योतिको चमक हुनुहुन्छ तपाईंको उपकारकर्तालाई ममाथि एक पल्ट बढाउनुहुन्छ र मेरो दु: खमा मलाई मद्दत गर्न आउनुहुन्छ; तपाईं जो दरिद्रको भाई र मित्र हुनुहुन्छ र हामीलाई कहिले एक्लै न छोड्नुहोस् ताकि हामी कहिल्यै नफर्कौं, तपाईं जो सधैं हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, ममाथि कृपा गर्नुहोस् र मेरो समस्या र कमजोरीहरूमा मलाई सहयोग गर्नुहोस्, ममाथि दया गर्नुहोस् र मलाई मेरा समस्याहरूबाट छुटाउनुहोस्, र परमेश्वर र मानिसहरू बीच एक अद्वितीय मध्यस्थको रूपमा, उहाँ मेरो बिन्ती उहाँ समक्ष प्रस्तुत हुन।
येशू, मेरो असल येशू, मेरो प्यारो येशू, अब मलाई चाहिएको यस महान् आवश्यकतालाई हेर्नुहोस्: मेरो जागिर खोजीमा म आफूलाई अस्थिर महसुस गर्छु, यद्यपि मैले प्रयास नगरे पनि मैले यो फेला पार्न सकेन र मलाई तुरुन्तै यसको आवश्यकता छ किनकि मेरा आवश्यकताहरू चरम र हताश भएका छन्। म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु मलाई तपाईको मायालु सहयोग दिनुहोस्।
येशू, मेरो असल येशु, मेरा प्रिय येशू, मैले ढोका बन्द गरेको सबै ढोका खोल्दछ, मलाई राम्रो रोजगारी वा व्यवसाय हुन मद्दत गर्दछ जसले मलाई आर्थिक स्थिरता प्रदान गर्दछ र मलाई सुधार गर्न र अगाडि बढ्ने सम्भावना दिन्छ, सभ्य वा सम्पन्न जागिर वा व्यवसाय जहाँ मँ पेशेवर र व्यक्तिगत बृद्धि गर्न सक्छु।
येशू, मेरो प्यारा येशू, मेरो प्यारो येशू, आत्मा र शरीरलाई शान्तिले भर्नुहुने तपाईं, मेरो भित्रबाट हुने असुविधालाई कम गर्नुहुन्छ, मलाई यस नराम्रो घडीबाट बाहिर निकाल्न दिनुहोस् र मलाई गहिरो र गहिरोमा डुबाउन नदिनुहोस्।
निराशा र अभावको यस घडीमा मैले लिएका कदमहरूमा मलाई मार्गनिर्देशन गर्दछ, मलाई राम्रो जागिर प्रस्तावहरू भेट्टाउन, मेरो लागि सबै ढोका खोल्नुहोस् र इमान्दार व्यक्तिहरूलाई मेरो समर्थन गर्ने व्यक्तिहरूलाई मेरो समर्थनमा राख्नुहोस्; मलाई मेरो क्षमता र लगनशीलता र हार मान्न दृढता प्रदर्शन गर्न बुद्धि दिनुहोस्।
मलाई राम्रो जागिर पाउन मद्दत गर्नुहोस् जहाँ म मेरो कर्तव्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्दछु र पैसा कमाउन सक्दछु जुन मेरो घरमा अत्यन्त नराम्रो हुन्छ, मेरो असल येशूलाई तपाईंको आशीर्वाद पठाउनुहोस् ताकि म मलाई चाहिएको चीजहरू पाउन सक्दछु।
(अथक विश्वासका साथ भन्नुहोस् कि तपाई के पाउन चाहानुहुन्छ)
येशू, मेरो राम्रो येशू, मेरो प्यारो येशू, म तपाईं हुँ मलाई सबै सुविधाहरु को लागी र म पक्का छु कि आउन को लागी को लागी को लागी को लागी को लागी धन्यवाद छ, म तिमीहरु सबै छु र म स्वर्ग मा सदाका लागि चाहन्छु , जहाँ म तपाईंलाई सँधै र सदाको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब तपाईंबाट टाढा छु।
त्यसो भए। आमेन
के तपाईंलाई days दिनमा काम पाउन प्रार्थना मनपर्‍यो?
धेरै पटक हामी जान्छौं कि त्यहाँ काम उपलब्ध हुन्छ जहाँ हामी काम गर्न चाहान्छौं तर त्यो व्यावसायमा असम्भव छ कि त्यो जागिरमा जानको लागि सक्षम हुनु।
यी अवस्थाहरूमा प्रार्थना भन्दा राम्रो अरू केहि छैन किनभने उनी हाम्रो परिचयको सर्वश्रेष्ठ पत्र हो।
जब एक रोजगार अन्तर्वार्ता प्रविष्ट हामी स्वर्ग र पृथ्वीका सार्वभौम ईश्वर सृष्टिकर्तालाई सोध्न सक्दछौं राम्रो छाप प्रदान गर्नका लागि अनुग्रह दिन।
अर्कोतर्फ, हामीले जहिले पनि यो सोध्नुपर्दछ कि कहिलेकाहिँ हामीले चाहेको कुरा प्रभुले चाहानु भएको होइन, यस अर्थमा हामी परमेश्वरको इच्छा के हो मात्र गर्न धेरै सजग हुनुपर्दछ।
अर्को काम वाक्यमा अगाडि बढौं।
तत्काल काम अनुरोध गर्न
भगवान संसारमा सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता हुनुहुन्छ।
मलाई उनको ठूलो प्रशस्ततामा भरोसा छ र उसले मलाई अहिलेसम्म प्राप्त गरेको सब भन्दा राम्रो काम दिनेछ।
एउटा काम जहाँ म खुशी हुनेछु।
म समृद्ध हुनेछु, किनकि मसँग धेरै चढ्ने अवसरहरू छन्। काम जहाँ काम वातावरण अद्भुत छ।
एउटा काम जहाँ मेरा मालिकहरू ईश्वरसँग डराउँछन् र उनीहरूका कामदारहरूका लागि न्यानो र निष्पक्ष वातावरण प्रदान गर्दछन्।
यस कारणले गर्दा, म त्यो जागिरमा लामो समय सम्म रहन्छु र सबै चीजसँग मिल्दोजुल्दो गरी भगवानसँग मेरा धेरै चीजहरू छन् जहाँ काम गर्दा म खुशी हुनेछु। संसार.
कृतज्ञताका साथ, म सँधै खुशी रहनेछु, प्रभुको सबै खुशी संग साझा, चुपचाप नम्रता र मेरो उदाहरण संग सिकाउन, दृढता, वफादारी, निर्ममता, जिम्मेवारी र हरेक दिन धेरै खुशी संग दिन, म सबै भन्दा राम्रो, त्यसोभए के म मायाको साथ गर्छु भन्ने छ धेरै व्यक्तिको फाइदाको लागि।
आमेन, धन्यबाद बाबा जुन तपाईंले मलाई सुन्नुभयो र यो सकियो
त्यस्तो ठाउँमा पुग्नु जहाँ उनीहरू स्टाफको खोजी पनि गर्दैनन् र कामको लागि आवेदन दिन एउटा चरण हुन सक्छ जसको लागि उच्च स्तरको साहस चाहिन्छ किनभने त्यहाँ राम्रो अवसर छ कि हामी आफ्ना सबै सीपहरू नदेखी पनि अस्वीकृत हुन्छौं।
La जागिरको लागि सोध्नुहोस् अर्जेन्टले हामीलाई अनौंठो रोजगारको लागि आवेदन दिनको प्रारम्भिक परीक्षा पास गर्न मद्दत गर्न सक्छ र यो होइन कि हामीले एउटा विज्ञापन देख्यौं।
जागिरको अनुरोधको समयमा, आत्मिक मद्दत अनुरोध गरिएको छ कि कहाँ जानुपर्दछ, ताकि हामी घर छोड्ने क्षणदेखि हामी यसमा फर्कन नसक्दासम्म परमेश्वर हाम्रो पाइलालाई निर्देशित गर्दै हुनुहुन्छ।
मलाई एक काम कल गर्न
प्रिय स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, येशूका नाममा, म तपाईको ज्ञान र विश्वासमा खोजी गर्दछु, मलाई मेरो लागि सबैभन्दा उत्तम कामको लागि निर्देशन दिन।
म पहिले नै तपाईंको कृपा र सत्यको अन्तर्गत हिँड्न चाहान्छु र आफ्नै इच्छा र सतही समझका अघि झुक्ने छैन।
मलाई राम्रो काम प्राप्त गर्न मद्दत गर्नुहोस् जुन, मेरो आफ्नै हातले, मबाट वा मेरो कुनै पनि हराइरहेको छैन।
हे बुबा, म चिन्ता वा चिन्तामा फिक्री गर्ने छैन किनकि मलाई लाग्छ तपाईको शान्ति मेरो हृदय र दिमागमा आउँदैछ।
तपाईं मेरो जीवित पानीको स्रोत हुनुहुन्छ, मलाई तपाईंको प्रोभिडेन्समा विश्वास छ र तपाईंले मलाई दिनुभयो बल दिनदिनै मेरो जीवनको उतार चढावहरूको प्रतिरोध गर्न।
हे बुबा, म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु, मलाई तपाईंको धनीताको आधारमा रोजगारको लागि र हाम्रा प्रभुको महिमाको लागि।
हे भगवान, आज तपाईको बल मसँग काम खोज्न सक्छ। मलाई त्यो काममा लैजानुहोस् जुन म मेरो सारा प्राणको साथ मन पराउँछु।
मलाई सम्मान र सहयोगको वातावरणको साथ एक सुरक्षित र आनन्दित वातावरणमा एक स्थानमा मार्गदर्शन गर्नुहोस्।
मलाई मेरो लागि भन्डार भएको नयाँ जागिरमा त्यो मानसिक र आध्यात्मिक सन्तुलन फेला पार्न मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु, आज मलाई सुन्नुभयो र मलाई सहयोग गर्नुभयो।
जीवन सँधै सजिलो हुँदैन, तर म यो कुरा सम्झन प्रयास गर्दछु कि तपाईं मेरो जीवनको हर समय मलाई सहयोग गर्न आउनुहुन्छ।
धन्यका होऊन् प्रभु, धन्य हुनहुन्छ तपाईंको पवित्र नाम आमीन।
यस कम्पनीमा हामीले पहिले नै हाम्रो कागजात छोडेको क्षणमा हामीले त्यो फोनलाई छोटो समयमा हुने कलको लागि कुर्दै घर फर्कनु पर्छ किनभने यस सम्बन्धमा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो परिक्षण निराश बिना पर्खनु हो।
धैर्यता यस पर्खाइ प्रक्रियामा कुञ्जी हो।
जहाँसम्म, हामी सँधै पर्खनु पर्दैन, उनीहरूले दुईलाई टुक्राहरू हाम्रो पक्षमा सार्न भनिरहेका छन् ताकि हामी पर्खिरहेका सकारात्मक कल चाँडो भन्दा चाँडो आउनेछ।
कामको लागि प्रार्थनाको क्रममा विश्वास हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बढि केहि छैन।